PEACEFUL PA: ဆံပင် - Hair
By Sherry Hutson Camperson
ဆံပင်ဟာ နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေမှာ ပေါက်တဲ့ အမွေးအမှင်ပါ။ အမွေးနုကလေးကနေ ကြမ်းတမ်းစူးရှတဲ့ ဖြူဆူးအထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါက်ပါတယ်။ ဝေလငါးကတော့ နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေထဲမှာ အမွေးအမှင် အနည်းဆုံးပါ။
လူမှာ နူးညံ့တိုတောင်တဲ့ အမွေးအမှင်တွေ တကိုယ်လုံး ပေါက်တတ်ပေမယ့် ခေါင်းက ဆံပင်ကတော့ အထူဆုံးပါပဲ။ ကွယ်ကာဖို့နဲ့ နွေးထွေးစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ခွံပေါ်နဲ့ ခြေဖ၀ါး၊ လက်ဖ၀ါးတွေပေါ်မှာတော့ အမွေးအမှင် မပေါက်တတ်ပါဘူး။
ဆံပင်မွေးတိုင်းမှာ အခြေခံအားဖြင့် ၂ ပိုင်းပါပါတယ်။ ဆံပင်ချောင်းနဲ့ အမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားထဲက ထွက်လာတဲ့အခါ အမြစ်ကနေ ဆံပင်ချောင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ တလကို ၁ လက်မခွဲ ရှည်ထွက်ပါတယ်။ ၄ နှစ်လောက် ရှည်ထွက်လာပြီးရင် ကျွတ်ထွက်သွားပါတယ်။ အသစ်တချောင်း အစားထိုးပေါက်လာပါတယ်။ ပေါက်လိုက်၊ ကျွတ်လိုက် ပုံမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆံပင်ချောင်းပိုင်းဟာ လုံဝန်းတဲ့ ပုံစံရှိပါတယ်။ နဂို ဆံပင်ကောက်သူတွေကတော့ ပြားတဲ့ပုံစံ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်နီရင် ခေါင်းမှာ ဆံပင် ၉၀,၀၀၀ ရှိပါတယ်။ နက်ရင် ၁၀၃,၀၀၀ ။ ညိုရင် ၁၀၉,၀၀၀ ။ ရွှေရောင်က ၁၄၀,၀၀၀ ရဲ့ အထက်ရှိပါတယ်။ ပိုနဲနဲ၊ လိုနဲနဲပဲ ကွာပါမယ်။
ဆံပင်ဟာ အရေပြားဆဲလ်တခုသာ ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ကို မာကြောသန်မာစေဖို့ ကဲရတင် Keratin ဓါတ် နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒီဓါတ်ကို လက်သည်း၊ ကြံချို၊ မြင်းခွါနဲ့ ငှက်မွေးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အမြစ်ပိုင်းကတော့ သွေးကြောမျှင်တွေနဲ့ ဆက်နေပါတယ်။ ဆံပင်တချောင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တာတွေ အားလုံးပါပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့၊ သီးသန့် ပင်ကိုယ်သဘာဝ ဖြစ်စေတဲ့ DNA ပါပါတယ်။ ကိုယ့်ပင်ကိုယ် သဘာဝဖြစ်စေမယ့် အရာအားလုံးဟာ ဆံပင်တချောင်းထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
ဆံပင်တချောင်းကို စနစ်တကျ လေ့လာကြည့်ရင် ကျား/မ၊ လူမျိုး စတဲ့အကြောင်းအရာ များစွာကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြစ်မှုဖြစ်ပွါးတဲ့ နေရာမှာတွေ့ရတဲ့ ဆံပင်ကို ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး လေ့လာရင်၊ တရားခံရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အချက်တွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ဆံပင် အမြစ်ကနေ၊ ဆံပင်အဖျား အကွဲပိုင်းအထိ ဖန်ဆင်းထားတာပါ။ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်ဘယ်နှစ်ချောင်း ရှိတယ်ဆိုတာ ဘုရားသခင် အတိအကျ ရေတွက်ထားပါတယ်။ ( မဿဲ ၁၀း ၃၀ ) တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အမွေးအမှင်တွေကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားတာပါ။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဆံပင်အမျိုးအစားအတွက် စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အသားအရောင်၊ မျက်လုံးအရောင်တွေဟာ ဆံပင်ရောင်နဲ့ ဆက်နေကြတာပါ။ တိုတို၊ ရှည်ရှည် ဘုရားပေးတဲ့အတိုင်း နေကြရတာပါ။ ။
From “Hair: The Long and the Short of It” by Sherry Huston Camperson.
Labels: Reader, သဘာဝ, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ
The Miracle of Photosynthesis အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ အ...
Mozart - မိုဇတ်
Alzheimer’s Disease အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ
Even Bacteria Get Sick - ဘက်တီးရီးယားတွေလည်း ဖျာြး...
Solving religious problems in peace ဘာသာရေးပြဿနာမျ...